कसरी बढाउन सकिन्छ आफ्नाे इच्छाशक्तिलाइ ? जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
सुरू नै नगरी सफलता मिल्दैन । त्यसैगरी सुरू गरिसकेपछी सफलताकाे लागी धैर्यता र लगनशीलता चाहिन्छ । त्यसकाे लागी दृण इच्छाशक्तिकाे आवश्यकता पर्छ । जब इच्छाशक्तिमा कमी आउन थल्छ, व्याक्ति बीच बाटाेबाट या गन्तव्यकाे नजिक पुगेर पनि थाकेर फर्किन्छ । र इच्छाशक्ति नहुने व्याक्तिले त केही सुरू नै गर्दैन ।
यसरी बढाउन सकिन्छ इच्छाशक्तिलाइ
सबैभन्दा पहिले आफुलाइ मन पर्ने र आफुसँग भएकाे क्षमता भएकाे कामकाे खाेजी गर्नुहाेस् । त्यसपछी त्याे सुरूवाती बिन्दुले तपाइलाइ पछी कहाँसम्म लैजान सक्छ ? तपाइले के प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाइकाे जिवनकाे लक्ष्य के हाे ? आदी प्रश्नकाे उत्तर आफैलाइ साेधेर स्पष्ट हुनुहाेस् ।
एकैपटक ठुलाे लक्ष्य बाेकेर हिड्नुभयाे भने तपाइ बिस्तारै हतास हुने सम्भावना बढ्छ । जसले गर्दा तपाइकाे इच्छाशक्ति पनि कम हुँदै जान्छ । त्यसैले अाफ्नाे मुख्य लक्ष्यमा पुग्नकाे लागी स-साना अरू लक्ष्य बनाउनुहाेस्, जस्ताे कि, एक महिनामा मैले त्याे काम सक्नेछु, एक वर्षमा मैले त्याे कामकाे थलानी गर्नेछु, दुइ वर्षमा म याे स्थानमा पुग्रेछु आदी ।
त्यसपछी ति साना लक्ष्य पुरा हुँदा आफुलाइ स्याबासी दिनुहाेस् । यसरी याेजना बनाउनाले तपाइकाे इच्छाशक्ति बढ्दै जान्छ ।आफुमाथी लगानी गर्नुहाेस् । जब तपाइले आफुमाथी लगानी गर्नुहुन्छ, तपाइमा उत्साह र उत्प्रेरणा जाग्छ । जसले स्वाभाविक रूपमा इच्छाशक्ति पनि बढाउँछ ।
त्यसैले समय-समयमा विभिन्र कार्यक्रममा सहभागी हुने, नयाँ कुरा सिक्ने, आफ्नाे लागी उपहार किन्रे, व्याक्तित्व विकासकाे लागी नयाँ तरिका अपनाउने गर्नुहाेस् ।एउटा काम सफल भएपछी सन्तुष्ट भएर नबस्नुहाेस् । सफलतालाइ कुनै एउटा गन्तव्य हाेइन, निरन्तर यात्राकाे रूपमा लिनुहाेस् ।
तपाइलाइ एउटा पहाड चढिसकेपछी थाहाँ हुन्छ कि, तपाइले चढ्नुपर्ने र चढ्नसक्ने अझँ धेरै पहाडहरू बाँकी छन् । स्वास्थ्य राम्राे नभएकाे खण्डमा व्याक्तिले आफुलाइ लक्ष्यमा समर्पित गर्न सक्दैन । निराशाले सताउन थाल्छ । त्यसैले शारीरिक तथा मानशिक दुवै किसिमले स्वस्थ रहने प्रयास गर्नुहाेस् ।
हरेक दिन बेलुका आफुले गरेकाे कामकाे बारेमा डायरीमा लेख्नुहाेस् । आफु पहिले कहाँ थिएँ, अहिले कहाँ छु भन्रे मुल्याङ्कन गर्नुहाेस् । त्यसपछी भाेलिकाे लागी समय तालिका बनाएर सुत्नुहाेस् । यसले तपाइलाइ अगाडी बढी रहन प्रेरित गर्छ । आफ्नाे क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरूसँग काम गर्नुहाेस् । सकारात्मक साेच भएकाे साथीहरूकाे सँगत गर्नुहाेस् । प्रेरणाहायी सामाग्री पढ्नुहाेस् ।
यी ९ बानी त्याग्नुहोस्, नयाँ वर्षमा सफल भइनेछ
आफ्नो करिअर र विजिनेशमा सफल हुनका लागि नयाँ–नयाँ कुराहरु जोड्न वा सोच्न आवश्यक छैन । बरु तपाईसँग भएका बानी तथा अन्य खराब पक्षहरु छोडे वा परिवर्तन गरे सफलता टाढा हुन्न । यहाँ प्रत्येक मानिसका लागि सफलताका अनेक परिभाषा हुुन्छन् । यसमा केही चिज तपाईंले आजै र अहिले नै त्याग्न सक्नुहुन्छ भने कतिपय चिज त्याग्न समय लाग्नसक्छ ।
1.अस्वस्थ जीवनशैली त्याग्ने
3.निश्चित सोंच त्याग्ने
4.जादूमाथि विश्वास नगर्ने
5.आफ्नो परफेक्सनजिमलाई छाड्ने
6.धेरै काम एकसाथ नगर्ने
यदि तपाई रोकिएपछि प्रत्येक भूूक्ने कुकुरलाई ढुुंगा हान्नुुहुन्छ भने तपाई आफ्नो लक्ष्यसम्म कहिल्यै पुुग्न सक्नुुहुन्न । सफल व्यक्तिले यो कुरालाई राम्रोसँग बुुझेका हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरु एउटा चिजलाई मात्र छान्छन् र त्यसलाई पूरा गर्छन । यसमा चाहे कुनै विजिनेश आइडिया नै किन नहोस्।
7.हरेक चिजलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न
केही काम तथा चिज हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ । तर सबै चिज हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । सफल व्यक्तिलाई यो सूत्र पनि मज्जाले थाहा हुन्छ।
8.सबै कुराका लागि ‘हुन्छ’ भन्न छाडिदिने
9.गलत कुरा गर्ने र बोल्नेसँग टाढै बस्ने
जो मानिसहरुसँग हामीले धेरै समय बिताउँछौ, हामी पनि उनीहरुजस्तै हुन्छौ भनिन्छ । यहाँ केही व्यक्ति व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवनमा एड्भान्स हुन्छन् भने कोही धेरै नै एड्भान्स । यसकारण, यदि तपाई आफूभन्दा कम एड्भान्स व्यक्तिसँग मात्र संगत गर्नुहुन्छ भने तपाईको सफलता पनि कम नै हुन्छ । त्यसकारण आफूूभन्दा एड्भान्स व्यक्तिको संगतमा रहनुुहोस् । झूठ बोल्ने र गलत काम गर्ने घटियाहरुसँगको संगतदेखि टाढै बस्नुहोस् ।
Don't Miss it यस्ता खानेकुरा खानुहेस् जसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ
Up Next खुसी कहाँ र कसरी भेटिन्छ ? जान्रुहाेस्